Interview with Sai Kyaw Nyunt of SNLD. Part-2. ~ Htet Aung Kyaw
Interview with Sai Kyaw Nyunt of SNLD. Part-2.
4:52 AM Htet Aung Kyaw No comments
“စစ်တပ်က ဘယ်နေ့ ဘယ်ရက်မှာ နိုင်ငံရေးကနေထွက်မလဲဆိုတာကို တိတိလင်းလင်းပြောဖို့ လိုပါတယ်”
(၃၀ / ၅/၂၀၂၂)
မြန်မာနိုင်ငံ လက်ရှိရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ပြသာနာတွေဖြေရှင်းဖို့ ဆွေးနွေးပွဲလုပ်တဲ့အခါမှာ အာဏာသိမ်းထားတဲ့ စစ်တပ်ဖက်ကနေ “ဘယ်နေ့ ဘယ်ရက်မှာ နိုင်ငံရေးကနေထွက်မလဲဆိုတာကို တိတိလင်းလင်း ကြိုတင်ကတိပေးဖို့ လိုပါတယ်” လို့ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် SNLD ပါတီ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး (၁) စိုင်းကျော်ညွန့်ကပြောပါတယ်။
စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းပြီး တနှစ်ကျော်ကာလအတွင်း ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ဘက်ပေါင်းစုံ ဆုတ်ရုပ်နေမှုကို ဘယ်လိုအဖြေရှာနိုင်မလဲ၊ နိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်က ဘာဖြစ်မလဲဆိုပြီး BNN သတင်းဌာနမှ ဦးထက်အောင်က မေးမြန်းစဉ် သူက အဲဒီလို ဖြေကြားခဲ့တာပါ။
- ရွေးကောက်ပွဲအသစ်ကို ပါတီတွေ ဘာကြောင့် စိတ်မဝင်စားသလဲ...
- စစ်တပ် အာဏာသိမ်းမှုကြောင့် တိုင်းပြည်ဘယ်လောက်အထိ နောက်ပြန်ဆုတ်သွားသလဲ...
- နိုင်ငံရေးအရ ဆွေးနွေးအဖြေရှာမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာအောင် စစ်တပ်ဖက်က ဘာတွေ ကြိုတင် ကတိပေးဖို့လိုအပ်မလဲ...
- ပြည်သူတွေရဲ့ ရုန်းကန်တိုက်ပွဲဝင်မှုအပေါ် အားလုံးက ဘယ်လိုဝိုင်းကူသင့်သလဲ...